ဝိမုတ္တိသုခ (The Bliss Of Emancipation): August 2012
အရဟံဂုဏ်တော် ငါးပါး ဘုရားရှိခိုး
၁။ အာရကတ္တာ အရဟံ။သော ဘဂ၀ါ = ထိုမြတ်စွာဘုရားသည်၊ အာရကတ္တာ = ကိလေသာမှ ဝေးကွာတော်မူသောကြောင့်လည်း၊ အရဟံ = အရဟံမည်တော်မူပါပေ၏။
၂။ အရီနံ ဟတတ္တာ အရဟံ။
သော ဘဂ၀ါ = ထိုမြတ်စွာဘုရားသည်၊ အရီနံ ဟတတ္တာ = ကိလေသာတည်းဟူသော ရန်သူအပေါ်င်းတို့ကို၊ မှုန့်မှုန့်ညက်ညက် ကျေပျက်အောင် ချေဖျက်တော်မူနိုင်သောကြောင့်လည်း၊ အရဟံ = အရဟံမည်တော်မူပါပေ၏။
၃။ အရာနံ ဟတတ္တာ အရဟံ။
သော ဘဂ၀ါ = ထိုမြတ်စွာဘုရားသည်၊ အရာနံ ဟတတ္တာ = သံသရာတည်းဟူသော အကန့်အကွက်တို့ကို ဖျက်ချိုးတော်မူနိုင်သောကြောင့်လည်း၊ အရဟံ = အရဟံမည်တော်မူပါပေ၏။
၄။ အရဟတ္တာ အရဟံ။
သော ဘဂ၀ါ = ထိုမြတ်စွာဘုရားသည်၊ အရဟတ္တာ = လူနတ်ဗြဟ္မာ သတ္တ၀ါအပေါင်းတို့၏ အလှူတော်အတန်တန် အပူဇော်မှန်သမျှကို ခံယူတော်မူထိုက်သောကြောင့်လည်း၊ အရဟံ = အရဟံမည်တော်မူပါပေ၏။
၅။ ရဟာဘာဝတော အရဟံ။
သော ဘဂ၀ါ = ထိုမြတ်စွာဘုရားသည်၊ ရဟာဘာဝတော = ဆိတ်ကွယ်ရာ အရပ်၌ပင် မကောင်းမှုဟူသမျှကို ပြုတော်မမူသောကြောင့်လည်း၊ အရဟံ = အရဟံမည်တော်မူပါပေ၏။
တဿ ဘဂ၀တော = အရဟံဂုဏ်တော်သခင် ထိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအား၊ နမော = ရိုသေမြတ်နိုးလက်စုံမိုး၍ ရှိခိုးပါ၏ အရှင်ဘုရား။
Posted by The Bliss Of Emancipation at 9:43 AM0comments Links to this post
Labels: Dhamma Notes
စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောဘ၀ကို ဓမ္မဖြင့် တည်ဆောက်ခြင်း
ကျွန်တော် ဘာသာရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး လုပ်ချင်တဲ့ ကိစ္စအတော်များများမှာ အမြဲတမ်း အားတက်သရော ကူညီပေးတတ်တဲ့ ညီမငယ် M.N.Pyone ရဲ့  သြဂုတ်လ (၃၀)ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ မွေးနေ့အတွက် အမှတ်တရ ဒီဓမ္မစာစုလေးကို လက်ဆောင်အဖြစ် ရေးပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ညီမမွေးနေ့မှာ အမှတ်တရဖြစ်အောင်ရော၊ ကုသိုလ်တရားတွေကို ရှေးကထက်ပိုအာရုံပြုနိုင်ဖို့အတွက်ရော ရည်ရွယ်ပြီး ဒီစာစုကို မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ် ရေးပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။ ညီမသိပြီးသားဖြစ်မယ့် အကြောင်းအရာတွေကိုပဲ အကိုစဉ်းစားမိတဲ့ရှုထောင့်ကနေ ရေးထားတာမို့ စဉ်းစားစရာအတွေးသစ်တွေ ထပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တော့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းတွေတုန်းက အကိုခရီးတစ်ပတ်လောက်ထွက်သွားတာ ညီမသိလိုက်မယ်လို့ထင်တယ်။ မရောက်ဖူးသေးတဲ့ အရပ်ဒေသတွေကိုသွားလည်ပြီး ဒေသန္တရဗဟုသုတရှာမှီးရင်း၊ အပန်းလည်းဖြေရင်းဆိုပြီး ဂျပန်နိုင်ငံ အနောက်ပိုင်းက ထင်ရှားတဲ့မြို့ တွေဆီကို သွားလည်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ တစ်ယောက်တည်းခရီးရှည်သွားတာဆိုတော့ လူကတော့ အတော်လေးပင်ပန်းပေမယ့် စိတ်လွတ်လပ်မှုတော့အပြည့်ရခဲ့တယ်။ ဒီလိုနှင့် နောက်ဆုံး အိမ်ကိုပြန်ဖို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်ကို ရောက်လာခဲ့တယ်။ အဲဒီနေ့မနက်မှာ စိတ်ချရအောင် ဘူတာမှာ အပြန်ရထားလက်မှတ်ကို အရင်သွားဝယ်ထားလိုက်တယ်။ ညဘက်နောက်ဆုံးရထားနှင့် ပြန်မယ်လို့စိတ်ကူးပြီးပေါ့။
ရထားလက်မှတ်ဝယ်ပြီးတော့မှ ဒီနေ့ မပြန်ခင် ဘယ်နေရာတွေ သွားရင်ကောင်းမလဲလို့ ခရီးစဉ်ဆွဲတယ်။ အဲဒီအခါမှာ သွားသင့်တယ်လို့ ပြောထားတဲ့နေရာ (၁၀) ခုလောက်ထွက်လာတယ်။ အရင်ရှေးရက်တွေတုန်းကဆိုရင် ရောက်တဲ့မြို့ မှာ သွားသင့်တယ်လို့ ပြောထားတဲ့နေရာတွေကို တစ်ခုပြီးတစ်ခုအချိန်ရသလောက် လျှောက်သွားဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ဒီနေ့ကျတော့ ပြန်ဖို့ကရှိနေပြီဆိုတော့ ရထားစီးဖို့ ဘူတာပြန်ရောက်ရမယ့်အချိန်ကို ထည့်စဉ်းစားရတော့တယ်။ မဖြစ်မနေသွားသင့်တဲ့နေရာမျိုးလား၊ သွားရင် တကယ်အကျိုးရှိနိုင်မလား၊ အချိန်ဘယ်လောက်ကုန်နိုင်မလဲ၊ အဲဒီနေရာတွေကနေ ညဘက် ရထားပြန်စီးရမယ့်ဘူတာဆီကို ပြန်လာရင် လမ်းသင့်နိုင်မလား စတာတွေနှင့် ချိန်ရတယ်။ ဒီလိုနှင့်ဘဲ သွားသင့်တဲ့ နေရာ (၁၀)ခုထဲကနေ အဓိကနေရာ လေးခုလောက်ကိုပဲ ရွေးဖြစ်လိုက်တော့တယ်။
အရင်နေ့တွေကဆိုရင် ကိုယ်သွားတဲ့နေရာတွေမှာ စိတ်အေးလက်အေးနှင့် သေသေချာချာလျှောက်ကြည့်၊ နားချင်ရင် ကောက်နား၊ ထသွားချင်တဲ့အချိန်မှ ပြန်ထသွားလုပ်ခဲ့ပေမယ့် အဲဒီနေ့ကတော့ ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာ အချိန်ကို တတ်နိုင်သလောက် မလိုအပ်ပဲမသုံးဖြစ်အောင် သတိထားခဲ့ရတယ်။ ကိုယ်ဒီမြို့ မှာ နေဖို့ အချိန်က သိပ်မကျန်တော့ဘူးဆိုတဲ့ အသိက အမြဲခေါင်းထဲရောက်နေတယ်။ နောက်ပြီး နောက်ဆုံးရထားကိုအမှီ ဘူတာရောက်အောင်သွားမှဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွေးကလည်း လူကို Alert လုပ်နေတယ်။ ဒီတော့ အဲဒီနေ့က အချိန်အပိုမဖြုန်းဖြစ်ပဲ သွားရမယ့်နေရာတွေကိုသွား၊ နားချိန်ကို တိတိကျကျနား၊ နေရာအသစ်တစ်ခုကို စသွားရမယ့်အချိန်မှာ လေးဖင့်မနေပဲချက်ချင်းထသွားရင်း ညအပြန်ရထားအမီ ဘူတာကို ပြန်ရောက်နိုင်ခဲ့တယ်။
အဲဒီမှာ အကို ဘာကို သွားတွေးမိလိုက်လဲဆိုတော့ လူ့ဘ၀နှင့် သေခြင်းတရားကိုပါပဲ။ လူတွေမှာ သေဖို့အချိန် တဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာတာနှင့်အမျှ ဘ၀မှာ လုပ်စရာရှိတာတွေအများကြီးထဲကနေ ကိုယ့်အတွက် တကယ်မဖြစ်မနေ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာအချို့ ကိုပဲ စီစစ်ရွေးချယ်ပြီး မသေခင် ကြောင့်ကြစိုက်ပြီး အပြီးသတ်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ လိုအပ်ပါလားဆိုတာကို ဒီခရီးနောက်ဆုံးနေ့ အတွေ့အကြုံလေးကနေတဆင့် သင်ခန်းစာယူလိုက်မိတယ် ညီမရေ။
တိုက်ဆိုင်တာပဲလားတော့မသိဘူး။ ခရီးကပြန်ရောက်ပြီး သိပ်မကြာမီမှာပဲ အဆက်အသွယ်ပြတ်နေတာ နှစ်လလောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ဆီကဖုန်းဆက်လာတယ်။ သူ ဒီကြားထဲ ဆေးရုံတက်နေရတာမို့ ပျောက်နေတာပါလို့ပြောတော့ ဘာများဖြစ်လို့လဲလို့ သတင်းမေးမိတာပေါ့။ ဒီတော့ သူက အသည်းကင်ဆာဖြစ်လို့ ဆေးရုံနှစ်ခါတက်လိုက်ရတဲ့အကြောင်း ပြောလာတယ် ညီမရေ။ အကို သူနှင့်ဖုန်းပြောနေရင်း စိတ်ထဲ တော်တော်လေးမကောင်းဖြစ်သွားတယ်။ ဒီမိတ်ဆွေတော့ ဒီရောဂါနှင့်ဆိုရင် သူရှင်သန်ရမယ့်အချိန် သိပ်မကျန်တော့ဘူးဆိုတာ အကိုနားလည်လိုက်တယ်။ အသက်လေးဆယ်ကျော်ငါးဆယ်ပတ်ချာလည်လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်။ သူ့အတွက် တကယ်ဆက်နေခွင့်ရမယ်ဆိုရင် လူ့သက်တမ်းကအများကြီး ကျန်နေပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒီရောဂါအခြေအနေကို အကြမ်းဖျင်း နားလည်ထားမိတော့ သူ့အတွက်တကယ်ကို နှမြောဝမ်းနည်းမိတယ်။ သေမယ့်အချိန်ကိုလှမ်းမြင်နေရပြီဖြစ်တဲ့ သူတစ်ယောက်အတွက် ကျန်နေတဲ့ လက်ကျန်အချိန်တွေကို သူဘယ်လိုကိစ္စမျိုးတွေအတွက် ရွေးချယ်အသုံးချပစ်မလဲလို့ စဉ်းစားမိတယ်။
အင်္ဂလိပ်စကားမှာ Effective ဆိုတဲ့စကားနှင့် Efficient ဆိုတဲ့စကား နှစ်လုံးကို ညီမသိမှာပါ။ ဒီစကားနှစ်လုံးကို အလုပ်တွေလုပ်ကြလို့ အကျိုးရလဒ်ထွက်ရှိမှု အနေအထားကို ပြောချင်တဲ့အခါတွေမှာ သုံးတတ်ကြတယ်။ သူတို့နှစ်လုံးဟာ အဓိပ္ပါယ်တူသလိုလိုရှိပေမယ်လို့ အနှစ်သာရပိုင်းမှာတော့ ကွဲတာကို တွေ့ရတယ်ညီမရေ။
Effective ဆိုတဲ့ အသုံးက အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်လိုက်တဲ့အတွက် ဒီအလုပ်ကနေ အကျိုးအမြတ်တော့ထွက်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအကျိုးအမြတ်ထွက်ဖို့အတွက် ငွေကုန်ကြေးကျလည်း များရင်များမယ်၊ အချိန်တွေ အများကြီးလည်း ပေးရင်ပေးလိုက်ရမယ်၊ ကိုယ်ရောစိတ်ရော ပင်ပန်းချင်လည်း ပင်ပန်းမယ်။ ထွက်လာတဲ့ အကျိုးရလဒ်ကလည်း ဒီလောက်ကြီး နှစ်ထောင်းအားရ ဖြစ်ရလောက်အောင် ကောင်းချင်မှ ကောင်းမယ်။ ဒါပေမယ့် အလုပ်ပြီးမြောက်အောင်မြင်သွားတဲ့အတွက် Effective တော့ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောလို့ရတယ်။
Efficient ဆိုတာမှာကျတော့ ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်၊ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နှင့် အချိန်ကုန်၊ လူပန်း၊ ငွေကုန်ကြေးကျမရှိစေပဲ နောက်ဆုံးမှာ အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ အကျိုးရလဒ်ထွက်တဲ့အထိ လုပ်လိုက်နိုင်တာမျိုးကို ပြောချင်တာလို့ဆိုတယ်။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မြင့်နှင့် လုပ်လိုက်နိုင်တာမျိုးပေါ့။ တကယ်တော့ Efficient ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို သုံးလိုက်ရင် Effective လည်းဖြစ်ပြီးသားလို့ ပြောပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။
အကိုတို့တွေလည်း နေ့တိုင်းကိုယ်နှင့်ပတ်သက်ရာအလုပ်တွေ ကိုယ်စီလုပ်နေကြရတယ်။ စားဝတ်နေရေးအတွက်ရော၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စတွေအတွက်ရော၊ လူမှုရေးကိစ္စတွေအတွက်ရော၊ နောက် အမျိုးအမည်ခေါင်းစဉ်တပ်မရတဲ့ အလုပ်တွေလည်းအများကြီး ရှိသေးတယ်။ ဒီလိုနေ့စဉ်လုပ်နေရတဲ့ အကိုတို့ရဲ့ အလုပ်တွေကို ဒီအင်္ဂလိပ်စကားလုံးလေး နှစ်လုံးနှင့် အမြဲစမ်းစစ်နေဖို့ လိုမယ်လို့ထင်တယ်။ အခုလုပ်နေတဲ့အလုပ်က ကိုယ့်အတွက် Effective မှဖြစ်ရဲ့ လား၊ Efficient ရောဖြစ်သေးလား ဆိုပြီးပေါ့။ တခါတလေ အကိုတို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေက Effective အဆင့်တောင် မရောက်တာမျိုးတွေ တွေ့ရတတ်သေးတယ်။ ပေးလိုက်ရတဲ့အချိန်တွေ၊ ငွေတွေသာ ကုန်သွားတယ်။ ဘာအကျိုးမှ မယ်မယ်ရရ မရလိုက်တာမျိုးပေါ့။
သေဖို့ရက်ဆီကို တဖြည်းဖြည်းနီးလာပြီဖြစ်တဲ့ အကိုတို့တွေဟာ ဘ၀ကို Efficient ဖြစ်အောင် အသုံးချနေထိုင်တတ်ဖို့က မဖြစ်မနေ လိုအပ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့  အဆုံးအမတော်တွေအတိုင်း လိုက်နာကျင့်သုံးနေထိုင်နိုင်အောင် ကြိုးစားနေတဲ့ အကိုတို့ ညီမတို့တတွေဟာ ဒီကိစ္စကို ပိုပြီး သတိထားသင့်တယ်။ လူ့ဘ၀ကို ရောက်လာ၊ ရလာခြင်းဟာ ကုသိုလ်တရားတွေ စုဆောင်းဖို့၊ သံသရာလွတ်မြောက်ရာကို ရောက်အောင် အားထုတ်ဖို့ အတွက်ပဲ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ရဟန်းသံဃာတော်တွေလို တရားဓမ္မကို အချိန်ပြည့်အားမထုတ်နိုင်သေးတဲ့ လူဝတ်ကြောင်တွေအတွက် လောကီရေးကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ရင်း၊ မိသားစုတာဝန်တွေကို ထမ်းဆောင်ရင်း အားထုတ်နိုင်ဖို့ မြတ်စွာဘုရားရှင်က သတိပဋ္ဌာန်တရားတော်ကို ဟောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ နေရာမရွေး၊ အချိန်မရွေး၊ ဣရိယာပုဒ်မရွေး၊ အာရုံမရွေးမှာ အားထုတ်တတ်အောင် နည်းညွှန်ပြသပေးခဲ့ပါတယ်။
လူတိုင်းဟာ ဘ၀မှာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားရင်းနှင့် အသက်ရှင်နေကြရတယ်။ လိုအပ်ချက်တွေကို လူတစ်ယောက်ရဲ့ အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ပညာရှင်တွေက အဆင့်တွေခွဲပြီး သတ်မှတ်ကြတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ထင်ရှားတဲ့ သီအိုရီတစ်ခုရှိတယ်။ ညီမလည်း ကျောင်းတုန်းကတော့ သင်ဖူးခဲ့မယ်ထင်ပါတယ်။ Maslow ရဲ့  Hierarchy Of Needs ဆိုတာကိုလေ။ လူတွေရဲ့ ဘ၀မှာ အရင်းခံအဖြစ် လိုအပ်ချက်တွေကို ပိရမစ်ပုံနှင့်ဖော်ပြရှင်းလင်းခဲ့တဲ့ သီအိုရီပေါ့။ လူတွေရဲ့ အမူအကျင့်နှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းတွေ ပြောကြရပြီဆိုရင် ဒီသီအိုရီကို ထည့်ပြောရစမြဲကိုး။ ပိရမစ်ပုံရဲ့ သဘာဝအတိုင်း အောက်ဆုံးအဆင့်တစ်ခုကို ရရှိအောင်မြင်မှသာ နောက်အပေါ်ကအဆင့်တစ်ခုကို တက်လို့ရမယ့်သဘော၊ နောက်တစ်မျိုးပြောမယ်ဆိုရင် လူအများစုသာလျှင် အောက်ခြေအဆင့်တွေမှာရှိနေတတ်ပြီး၊ လူအနည်းစုသာလျှင် အထက်အထိပေါက်မြောက်ရောက်ရှိနိုင်ကြတယ်ဆိုတဲ့သဘော အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်လို့ရပါတယ်။
အဲဒီမှာ အောက်ဆုံးအဆင့် နံပါတ်(၁) က Biological and Physiological Needs တဲ့။ လူတစ်ယောက်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အသက်ရှူဖို့လေ၊ သောက်ဖို့ရေ၊ စားဖို့၊ ၀တ်ဖို့၊ နေဖို့၊ အိပ်ဖို့၊ ကာမဂုဏ်ခံစားဖို့။ ဒါတွေဟာ လူတိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာတွေလို့ ပြောပါတယ်။ ဒီလိုအပ်ချက်တွေ မပြည့်စုံနိုင်ပဲ လူတစ်ယောက်ဟာ ဘယ်လိုမှ အထက်အဆင့်တွေကို တက်ဖို့ ဖြစ်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။
ပထမအဆင့်ပြည့်စုံရင် ဒုတိယအဆင့် နံပါတ်(၂) က Safety Needs တဲ့။ ကိုယ့်ရဲ့  အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ် လုံခြုံစိတ်ချရမှုပေါ့။ ကိုယ့်ရဲ့  ခန္ဓာကိုယ်ကို လုံခြုံမှုရချင်တယ်။ အလုပ်အကိုင်နှင့်ပတ်သက်ပြီး စိတ်ချမှုရချင်တယ်။ ငွေကြေးဆိုင်ရာမှာလည်း စိတ်ချမှုရချင်တယ်။ ကျန်းမာရေးအတွက်၊ မတော်တဆ ထိခိုက်မှုဖြစ်တာတွေ၊ ရာသီဥတုဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုတွေ၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး စတာတွေအတွက် လုံခြုံစိတ်ချမှုရချင်တယ်။
ပထမအဆင့်နှင့် ဒုတိယအဆင့်ပြည့်စုံပြီဆိုရင် တတိယအဆင့် နံပါတ်(၃) က Love and Belongingness Needs တဲ့။ လူတွေရဲ့  စိတ်သဘာဝမှာ တစ်ဦးဦးဆီကဖြစ်ဖြစ်၊ လူတစ်စုဆီကပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုဆီကနေဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်က သူ့အတွက် (သို့) သူတို့အတွက် အရေးပါတဲ့နေရာကဏ္ဍလေးတစ်ခုကို မျှော်လင့်တတ်ကြတယ်။ သူတို့တွေရဲ့ ကြည်ဖြူလက်ခံမှုကို လိုချင်တတ်ကြတယ်။ ကိုယ်နှင့် အနီးကပ်ဆက်ဆံနေရတဲ့ မိသားစုဝင်တွေ၊ ဇနီးခင်ပွန်းတွေ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေဆီကနေ ဒီလိုအပ်မှုကို တောင့်တနေတတ်တယ်။ တချို့ ဖြစ်စဉ်တွေမှာ တခါတလေ ကိုယ်မျှော်လင့်သလို သူတို့တွေဆီက ချစ်ခင်လေးစားတန်ဖိုးထားမှုကို မရတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေနှင့် ကြုံရတဲ့သူတွေဟာ ပထမနှင့် ဒုတိယအဆင့်လိုအပ်မှုတွေကိုပါ အရေးမစိုက်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ပြီး ဒီတတိယလိုအပ်ချက်ကြောင့် အရူးတစ်ပိုင်း ဖြစ်တတ်တာမျိုးတွေလည်း ရှိတတ်တယ်။
အခုပြောခဲ့တဲ့ အဆင့်သုံးဆင့်ကို လူသားတစ်ဦးအတွက် အခြေခံအဆင့်တွေအဖြစ်နှင့်သတ်မှတ်ထားတယ်။ နောက်ထပ်လာမယ့် အဆင့် လေးနှင့်ငါးကိုတော့ မြင့်မားတဲ့ ဘ၀လိုအပ်ချက်တွေအဖြစ် ခွဲထုတ်ထားတယ်။ လေးနှင့်ငါးအဆင့်ကို သီးခြားခွဲထုတ်ထားတယ်ဆိုပေမယ့်လို့ တစ်ခုနှင့်တစ်ခုက သဘောတရားချင်း နီးစပ်မှုရှိနေပါတယ်။
စတုတ္ထအဆင့် နံပါတ်(၄) က ဘာလဲဆိုတော့ Esteem Needs ပါတဲ့။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးထားတာ၊ လေးစားတာ၊ သူများကလည်း ကိုယ့်ကို တန်ဖိုးထားလေးစားတာ၊ ကိုယ်ကလည်း သူများကို လေးစားတန်ဖိုးထားတာ၊ တခြားသူတွေအပေါ်တာဝန်ယူနိုင်တာ၊ အသိုင်းအ၀ိုင်းတစ်ခုထဲမှာ ကိုယ့်အတွက်နေရာပေးတာ၊ လွတ်လပ်မှုရှိတာ စတဲ့အချက်တွေကို လိုချင်လာပါတယ်တဲ့။ ဒီအဆင့်မှာပဲ ထပ်ပြီး နှစ်ပိုင်းခွဲထုတ်လိုက်ကြတယ်။ Cognitive Needs ရယ်၊ Aesthetic Needs ရယ်ဆိုပြီး။ Cognitive Needs အရ လူတွေက အသိပညာဗဟုသုတကိုရှာဖွေတာတွေ၊ ဘ၀ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကိုရှာဖွေတာတွေကို လုပ်လာကြတယ်။ Aesthetic Needs အရတော့ လူတွေဟာ အလှအပတရားတွေကို ခံစားနားလည်နိုင်ဖို့၊ ဟန်ချက်ညီတဲ့ဘ၀ပုံစံကို နားလည်နိုင်ဖို့တွေ ကြိုးစားလာကြတယ်လို့ဆိုတယ်။
နောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့ Self-Actualization Needs ပါတဲ့။ ဒီအဆင့်ကတော့ လူတစ်ယောက်အတွက် သူ့ပါရမီဓါတ်ခံ၊ စရိုက်ဝါသနာအရ သူမှာရှိတဲ့ အစွမ်းအစတွေအကုန်လုံးထုတ်သုံးပြီး သူဖြစ်ချင်တဲ့၊ သူဖြစ်ခွင့်ရှိတဲ့ သူ့ဘ၀ရဲ့ အိပ်မက်ကို တည်ဆောက်ခွင့် ရလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဆင့်ကို ရနိုင်ဖို့ကတော့ အောက်ကအဆင့်အားလုံးကို အောင်မြင်ဖြတ်သန်းနိုင်မှသာ ဖြစ်နိုင်ပါမယ်လို့ဆိုတယ်။ အဲဒီအဆင့်ကိုမှ နောက်ထပ် ထပ်ချဲ့ လိုက်တာက Transcendence Needs ပါ။ တကယ်လို့ အစွမ်းအစတွေကို ထုတ်သုံးလိုက်လို့ လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကို ရရှိအောင်မြင်ပြီးသွားတဲ့သူဟာ တခြားလူတွေကို သူလိုပဲအောင်မြင်ပေါက်မြောက်နိုင်ဖို့အတွက် ကူညီလမ်းပြစောင့်ရှောက်ပေးချင်တဲ့ လိုအင်ဆန္ဒကို ခေါ်ပါတယ်တဲ့။
ဒါကတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံသား စိတ်ပညာရှင် Abraham Harold Maslow ရဲ့  နာမည်ကျော် Hierarchy Of Needs Theory ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဆင့်ငါးဆင့်လုံးကို ရောက်နိုင်တဲ့သူဟာ အယောက်တစ်ရာမှာ တစ်ယောက်တောင်ရှိဖို့မလွယ်ပါဘူးတဲ့။ နောက်ပြီး အပေါ်ကအဆင့်တစ်ခုခုကို ရောက်ဖို့ကြိုးစားနေတုန်းမှာပဲ အောက်က အဆင့်တစ်ခုခုက အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း ရောက်နေတဲ့အဆင့်ကနေ နိမ့်လျှောကျသွားရတတ်တာမျိုးတွေ ရှိနေသေးတာကိုး။ ဒီတော့ ပိရမစ်ရဲ့  ထိပ်ဆုံးအထိရောက်ဖို့ဆိုတာ လူတိုင်းအတွက်တော့ မဖြစ်နိုင်တာ သေချာနေပါတယ်။
ဒီသီအိုရီကို အကိုတို့ ဓမ္မအမြင်နှင့် ယှဉ်ထိုးစဉ်းစားကြည့်ကြမယ်ဆိုပါတော့။ သာမန်လူသားတိုင်းအတွက်တော့ အောက်ခြေက လိုအပ်ချက် အဆင့်သုံးဆင့်က မဖြစ်မနေဖြည့်ဆည်းကြရမှာပဲ။ ဒီလိုဖြည့်ဆည်းတဲ့အခါမှာ ကိုယ်လုပ်သမျှကို Effective ဖြစ်မဖြစ်၊ Efficient ဖြစ်မဖြစ်နှင့် ချိန်ပြီးတော့ လုပ်နိုင်ကြရင်တော့ ပိုကောင်းတာပေါ့။ အဲဒီအဆင့်တွေကို အထိုက်အလျှောက်ပြည့်စုံလို့ စတုတ္ထအဆင့်ကို ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ ဘုရားရှင်ရဲ့  တပည့်သားသာဝကဟာ ဘ၀ရဲ့  အဓိပ္ပါယ်ကို ရှာဖွေတဲ့အခါမှာ ဓမ္မနှင့် ရှာဖွေလာကြတယ်။ လောကရဲ့ လွတ်မြောက်ရာကို သိချင်လာကြတယ်။ ဘ၀ကို ဓမ္မနှင့်တွဲပြီး ဟန်ချက်ညီညီနှင့် ဘယ်လိုနေထိုင်နိုင်မလဲလို့ စဉ်းစားလာကြတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ သတိပဋ္ဌာန်တရားတော်ဟာ ဘ၀လွတ်မြောက်မှုအတွက် တစ်ကြောင်းတည်းသောလမ်းဆိုတာကို သိလာကြတယ်။
စတုတ္ထအဆင့်ကို ရောက်တဲ့အချိန်မှာ သတိပဋ္ဌာန်တရားတော်နှင့်အညီ နေထိုင်ပြီး လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းဖို့ ကြိုးစားလာတော့ အောက်ခြေက အခြေခံလိုအပ်ချက်အဆင့်သုံးဆင့်ကို ပြည့်စုံအောင် ဆက်ပြီး ဖြည့်တဲ့နေရာမှာလည်း အဆင်ပြေလွယ်ကူလာတယ်။ အကုသိုလ်နည်းနည်း၊ စိတ်ပင်ပန်းမှုနည်းနည်းနှင့် လုပ်တတ်လာတယ်။ ဘ၀က တဖြည်းဖြည်းချင်း ဟန်ချက်ညီလာတယ်။ လုပ်တဲ့အလုပ်တော်တော်များများကို Efficient ဖြစ်အောင် လုပ်ဖို့ကို ဦးတည်စဉ်းစားနိုင်လာတယ်။ အကျိုးမရှိ၊ အနှစ်သာရမရှိတဲ့ အလုပ်တွေအတွက် အချိန်ပေးဖို့ တွန့်ဆုတ်လာတယ်။ မလုပ်ချင်တော့ဘူး ဖြစ်လာတယ်။
အကိုတို့ရဲ့  အရှေ့ မှာ သတိပဋ္ဌာန်တရားကို အားထုတ်ရင်းနှင့်ပဲ ပဉ္စမအဆင့်လိုအပ်ချက်ကို ပြည့်အောင် ဖြည့်သွားနိုင်ကြတဲ့သူတွေ အများကြီးရှိနေတာ တွေ့ရတယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း ပါရမီဓါတ်ခံအားလျှော်စွာ မိမိရည်မှန်းတဲ့ပန်းတိုင်တွေဆီ ရောက်ရှိပေါက်မြောက်သွားကြသလို ကိုယ်သိထားတဲ့အတိုင်း တခြားသူတွေလည်း သိနိုင်အောင် ပြန်ပြီး လမ်းပြကူညီ စောင့်ရှောက်ပေးနေကြတဲ့ သူတွေလည်း အများကြီးရှိနေတယ်။ တချို့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့လည်း ဒီပဉ္စမအဆင့်ကို ဓမ္မလမ်းကြောင်းနှင့်အညီ ဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့ ရှိသမျှအစွမ်းအစတွေ အကုန်ထုတ်သုံးပြီး အသီးသီး တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ကြိုးစားအားထုတ်နေကြတာ တွေ့နေရတယ်။
ဒီတော့ ဒါကိုကြည့်ပြီး ဘာကို ကောက်ချက်ဆွဲမိလဲဆိုတော့ သတိပဋ္ဌာန်တရားတော်အတိုင်းသာ လိုက်နာကျင့်သုံးနေထိုင်နိုင်မယ်ဆိုရင် အကိုတို့တတွေဟာ Maslow ပြောခဲ့တဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို ဘယ်အဆင့်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်အသက်အရွယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်ဘ၀အခြေအနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် အနှစ်သာရရှိရှိ ဖြည့်ဆည်းနိုင်တယ် ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်တယ်။ နောက်ပြီး လိုအပ်ချက်အဆင့်ငါးဆင့်လုံးကို ဓမ္မနှင့်အညီ ကျင့်ကြံနေထိုင်ဖြည့်ဆည်းသွားနိုင်တဲ့သူတွေ အရင်တုန်းကရော၊ အခုရော ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုလည်း သတိထားလိုက်မိတယ် ညီမရေ။ ဒါဟာ အကိုတို့တွေအတွက်တော့ အားတက်စရာခွန်အားပါဘဲ။
အကိုတို့ရဲ့ ကျန်ရှိနေတဲ့ ဘ၀အချိန်တွေမှာ လုပ်ရတဲ့အလုပ်တိုင်း အလုပ်တိုင်းကို Efficient ဖြစ်အောင် ကြိုးစားလုပ်ရင်း၊ မြတ်စွာဘုရားရှင် သင်ကြားပြသပေးခဲ့တဲ့ သတိပဋ္ဌာန်တရားတော်ကိုလည်း ကြိုးစားအားထုတ်ရင်း၊ ဖြည့်ဆည်းရမယ့်ဘ၀ရဲ့  လိုအပ်ချက်အဆင့်တွေကိုလည်း ဖြည့်ဆည်းရင်း နေထိုင်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင် ဘယ်အချိန်၊ ဘယ်အသက်အရွယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီဘ၀ကို စွန့်ခွာသွားရဖို့ အချိန်ရောက်လာရင်တောင် နောင်တရပူပန်နေစရာ၊ ၀မ်းနည်းပူဆွေးသောကဖြစ်နေစရာ ရှိလာမှာ မဟုတ်တာ သေချာနေပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေအမျိုးဖြစ်အောင် မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးက အကိုတို့အားလုံးကို လိုလေသေးမရှိ ဟောကြားဆုံးမထားခဲ့ပြီးပြီပဲ။
ကတံ ဝေါ တံ မယာ။
ဈာယထ ဘိက္ခဝေ မာ ပမာဒတ္ထ။
မာ ပစ္ဆာ ၀ိပ္ပဋိသာရိနော အဟုဝတ္ထ။
အယံ ဝေါ အမှာကံ အနုသာသနီ။
မယာ၊ ငါဘုရားသည်။ တံ၊ ထိုပြုသင့် ပြုထိုက်သော တာဝန်ကို။ ဝေါ၊ သင်တို့အတွက်။ ကတံ၊ ပြုပြီးပြီ။
ဘိက္ခဝေ၊ ရဟန်းတို့။ ဈာယထ၊ ၀ိပဿနာတရားကို အားထုတ်ကြကုန်လော့။ မာပမာဒတ္တ၊မမေ့လျော့ကြကုန်လင့်။
ပစ္ဆာ၊ နောက်မှ။ ၀ိပ္ပဋိသာရိနော၊ နှလုံးမသာမယာခြင်းသည်။ မာအဟုဝတ္ထ၊ မဖြစ်ကြကုန်လင့်။
အယံ၊ ဤသည်ကား။ ဝေါ၊ သင်တို့အတွက်။ အမှာကံ၊ ငါတို့၏။ အနုသာသနီ၊ အဆုံးအမတည်း။
(ဒွေဓာဝိတက္ကသုတ်။ သီဟနာဒ၀ဂ်၊ မူလပဏ္ဏာသ)
ကဲ... အကိုတို့ရဲ့  ဆရာသခင် မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့  တာဝန်ကတော့ ပြီးပြည့်စုံနေပါပြီ။ ကျန်တာကတော့ တပည့်အလိမ္မာတွေဖြစ်ချင်ကြတဲ့ အကိုတို့၊ ညီမတို့ တာဝန်ပဲ ရှိတော့တယ်မဟုတ်ပါလား ညီမရေ....။
ညီမရဲ့  မွေးနေ့မှသည် ရှေ့ ဆက်ပြီး ကောင်းမှုကုသိုလ်တရားတွေကို တိုးလို့စုရင်း မြတ်စွာဘုရားရှင်လမ်းညွှန်းပြခဲ့တဲ့ တရားအဆုံးအမတော်တွေအတိုင်း ကျင့်ကြံအားထုတ်နိုင်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားတဲ့ အမျိုးကောင်းသမီးတစ်ဦး ဖြစ်ပါစေကြောင်း ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သရင်း...။
(၃၀၊ ၈၊ ၂၀၁၂)
Posted by The Bliss Of Emancipation at 7:45 AM0comments Links to this post
Labels: Birthday Present Articles, စိတ်ကူးပုံရိပ် စာစုများ
ရှင်ဒေ၀ဒတ်၏ မြတ်စွာဘုရားရှင်အား နောက်ဆုံးကန်တော့သွားသော ဂါထာတော်
ဣမေဟိ အဋ္ဌီဟိ တမဂ္ဂပုဂ္ဂလံ၊ ဒေ၀ါတိဒေ၀ံ နရဒမ္မသာရထိံ။
သမန္တစက္ခုံ သတပုညလက္ခဏံ၊ ပါဏေဟိ ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဥပေမိ။
အဂ္ဂပုဂ္ဂလံ၊ လောကသုံးပါးထက် မြတ်သော ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော်မူသော။
ဒေ၀ါတိဒေ၀ံ၊ သမ္မုတိနတ် (လူပြည်မှ သာမန်မင်းများ) ဥပပတ္တိနတ် (နတ်ဗြဟ္မာများ) တို့ထက်လွန်သော ဝိသုဒ္ဓိနတ် (ရဟန္တာ) ဖြစ်တော်မူသော။
နရဒမ္မသာရထိံ၊ ဆုံးမထိုက်သူ အပေါင်းကို ကောင်းစွာ ဆုံးမတော်မူသော။
သမန္တစက္ခုံ၊ ထက်ဝန်းကျင် အပိတ်အပင်မရှိ သိမြင်နိုင်သော သဗ္ဗညုတဉာဏ်ရှင် ဖြစ်တော်မူသော။
သတပုညလက္ခဏံ၊ အရာမကသော ဘုန်းတော်, ယောက်ျားမြတ်တို့၏ အမှတ်လက္ခဏာတော် ရှိသော။
ဣမေဟိ အဋ္ဌီဟိ၊ ဤအရိုးတို့ဖြင့် လည်းကောင်း။
ဣမေဟိ ပါဏေဟိ၊ ဤအသက်ဝိညာဉ်တို့ဖြင့် လည်းကောင်း။
“လောကသုံးပါးထက် မြတ်သော ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော်မူသော၊ သမ္မုတိနတ်, ဥပပတ္တိ
နတ်တို့ထက်လွန်သော ဝိသုဒ္ဓိနတ် ဖြစ်တော်မူသော၊ ဆုံးမထိုက်သူ အပေါင်းကို ကောင်းစွာ ဆုံးမတော်မူသော၊ ထက်ဝန်းကျင် အပိတ်အပင်မရှိ သိမြင်နိုင်သော၊ သဗ္ဗညုတဉာဏ်ရှင် ဖြစ်တော်မူသော၊ အရာမကသော ဘုန်းတော်, ယောက်ျားမြတ်တို့၏ အမှတ်လက္ခဏာတော် ရှိသော ထိုမြတ်စွာဘုရားကို ဤအရိုးတို့ဖြင့် လည်းကောင်း၊ ဤအသက်ဝိညာဉ်တို့ဖြင့် လည်းကောင်း ဆည်းကပ်ခိုကိုးခြင်းသို့ ကပ်ရောက်ပါ၏”
Posted by The Bliss Of Emancipation at 11:45 AM0comments Links to this post
သစ်တုံးတရားတော် (၁၀) သစ်တုံးပမာ ဒေသနာတော် - သီးလုံးဆရာတော်
Credit To : U Khin Crays
Posted by The Bliss Of Emancipation at 9:46 AM0comments Links to this post
Labels: Dhamma Articles, ဒါရုက္ခန္ဓောပမသုတ်, သီးလုံးဆရာတော်ကြီး
သြဂုတ်လ (၅) ရက်နေ့ဟာ ကျွန်တော့်ဘ၀အတွက် အမှတ်တရဖြစ်စေတဲ့ လူ (၃) ဦးရဲ့ မွေးတဲ့နေ့တွေဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ယောက်ကတော့ ကျွန်တော့်အစ်မပါ။ သူက ကျွန်တော့်ထက် အသက် (၁၂)နှစ်ကြီးပါတယ်။ အသက်ဆယ်နှစ်ကျော်ကွာတဲ့ အစ်မဆိုပေမယ့် သူငယ်ချင်းပေါင်းပေါင်းပြီး ပြောမနာ၊ ဆိုမနာ၊ ဆဲမနာတွေပါ။ အခုအသက်အရွယ်အထိ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် စိတ်ဆိုးဒေါသဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာမျိုး မရှိအောင်ကို တည့်ကြတဲ့ မောင်နှမတွေပါ။
နောက်တစ်ယောက်ကတော့ ပြင်သစ်က ကမ္ဘာကျော်စာရေးဆရာ Guy de Maupassant ပါ။ သူ့မွေးနေ့ကလည်း ကျွန်တော့်အစ်မမွေးနေ့နှင့်သွားတူနေလို့ မှတ်မိတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းသားဘ၀တုန်းက အင်္ဂလိပ်စာမှာ The Necklace ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နှင့် သင်ခဲ့ရတဲ့ သင်ခန်းစာရဲ့  မူရင်းစာရေးသူပါပဲ။ စိန်ဆွဲကြိုးအတုကို အစစ်ထင်ပြီး ငှားဆွဲရာက ပျောက်ပြီး ဒုက္ခဖြစ်ရတဲ့အမျိုးသမီးအကြောင်းပါ။ သင်ဖူးခဲ့တဲ့သူတွေတော့ မှတ်မိကြအုံးမယ်ထင်ပါတယ်။ သူရေးတဲ့စာတွေဖတ်ရင်း သူ့အကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်တော့ Maupassant ဟာ နောက်ပိုင်း စိတ်ကျရောဂါဖြစ်ပြီး စိတ်ရောဂါကုဆေးရုံမှာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ သူ့ကိုယ်သူလည်း သေကြောင်းကြံခဲ့ဖူးပါသေးတယ်။ ကျွန်တော်က အဲဒီအကြောင်း သိရတော့ ကျွန်တော့်အစ်မကိုတောင် နောက်ပြီး ပြောဖြစ်သေးတယ်။ “အစ်မသတိထားနော်၊ အစ်မနှင့်မွေးနေ့တူတွေ ရူးပြီးသေတာ ကမ္ဘာ့စာပေသမိုင်းမှာ ရှိတယ်။” လို့။
ကျွန်တော်တို့တွေ အရပ်ထဲမှာ ပြောတတ်ကြတဲ့ စကားရှိပါတယ်။ “ရူးရင်ရူး၊ မရူးရင်ထူးမယ်” တဲ့။ (၅) ရက်နေ့မှာမွေးတဲ့ Maupassant ကတော့ ရူးသွားရှာပေမယ့် နောက်တစ်ဦးကတော့ ထူးပါတယ်။ အဲဒီ ကျန်တဲ့ နောက်တစ်ဦးကတော့ ကျွန်တော်တို့တွေ နေ့တိုင်းလိုလို Facebook မှာ သူ့ရဲ့ စာတွေကို ပို့စ်တွေ၊ ပုံတွေ၊ စာတွေမျိုးစုံ၊ ဒီဇိုင်းစုံနှင့်ရေးပြီး တင်နေကြ၊ ရှယ်နေကြ၊ ဖတ်နေကြရတဲ့၊ ကျွန်တော်တို့တွေ ချစ်ခင်လေးစားကြည်ညိုရတဲ့ ဆရာတော် ဦးဇောတိက ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာတော်ကို ၁၉၄၇ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၅) ရက်နေ့မှာ မွေးဖွားခဲ့တာမို့ ဆရာတော်ရဲ့ သက်တော်ဟာ ဒီနှစ်မှာတော့ (၆၅) နှစ် ပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာတော်ဟောခဲ့တဲ့တရားတွေ၊ ရေးခဲ့တဲ့စာတွေကြောင့် လူပေါင်းများစွာရဲ့  ဘ၀လမ်းကြောင်းတွေ ပြောင်းလဲသွားခဲ့ကြတာ ကာယကံရှင်တွေပဲ အသိဆုံးဖြစ်မှာပါ။ အဲဒီလို ပြောင်းလဲသွားခဲ့ကြတဲ့သူတွေထဲမှာ ကျွန်တော်လည်း တစ်ဦးအပါအ၀င်မို့ ဒီနှစ်ဆရာတော့်မွေးနေ့ကို ဆရာတော်ရဲ့  ကျေးဇူးဂုဏ်တွေကို အာရုံပြုရင်း ဒီစာကို မွေးနေ့အမှတ်တရ ရေးလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော်အထက်တန်းကျောင်းသားဘ၀ ၁၉၉၀ခုနှစ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဦးဆန်းလွင် အယ်ဒီတာချုပ်အဖြစ်နှင့်ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ “ဓမ္မရုပ်စုံ” မဂ္ဂဇင်းဟာ ဘာသာရေးစာပေလောကမှာ နှစ်အတော်ကြာ အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အမေက အဲဒီမဂ္ဂဇင်းကို လတိုင်းပုံမှန်ဝယ်ဖတ်တတ်ပါတယ်။ တခါတော့ အမေက မဂ္ဂဇင်းဖတ်ရင်း “သားရေ။ ဒီမှာ ဘုန်းကြီးတစ်ပါးအကြောင်း ရေးထားတာပါတယ်။ ဘာသာခြားကနေပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီး ဖြစ်သွားတာ၊ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့လည်း ရထားတယ်။ သူပြောတဲ့ တရားတွေမှာ အင်္ဂလိပ်လိုတွေလည်း ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာအကြောင်းတွေလည်းပါတယ်။ ထူးထူးခြားခြားပဲ။” လို့ အံ့သြသံနှင့်လှမ်းပြောတာ အခုထိ မှတ်မိနေပါတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းကတော့ ကျွန်တော်က အမေပြောတဲ့ အဲဒီဆရာတော်အကြောင်းကို ဒီလောက်စိတ်မ၀င်စားခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီတုန်းက ဓမ္မရုပ်စုံမှာ ကျွန်တော် စိတ်ဝင်တစားနှင့်ဖတ်ခဲ့တာ ဆရာဦးဆန်းလွင်ရေးတဲ့ “ပဏ္ဍိတာဗောဓိ” ဆိုတဲ့ အခန်းဆက်ဝတ္ထုရှည်ပါပဲ။ (အခုတောင် ပြန်ဖတ်ခွင့်ရရင် ဖတ်ချင်ပါတယ်။)
၁၉၉၈ မှာ တက္ကသိုလ်တက်ရင်း ကျောင်းတွေပိတ်လိုက်တော့ ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ အလုပ်ဝင်လုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာ အလုပ်က ပိုင်ရှင်သူဌေးနှင့် ကျွန်တော်နှင့်က နေ့တိုင်းနီးပါး အပြင်ကို အလုပ်ကိစ္စနှင့် သွားရတတ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ သူ့ကားပေါ်စရောက်လို့ ကားသော့ဖွင့်လိုက်တာနှင့် ကားကက်ဆက်ကနေပြီး ဆရာတော်တစ်ပါးရဲ့ တရားသံက ထွက်လာပါတော့တယ်။ အသံအေးအေးလေးနှင့် စကားပြောသလိုမျိုး၊ ဆရာကနေ တပည့်ကို စာရှင်းပြသလိုမျိုး ဟောတဲ့တရားသံမျိုး အရင်က ဒါမျိုး တစ်ခါမှ မကြားဖူးတော့ အထူးအဆန်းဖြစ်ရပါတယ်။ ဒါနဲ့ သူဌေးကို ဘယ်ကဆရာတော်လဲလို့ မေးတော့မှ ဆရာတော်ဦးဇောတိက မှန်း သိရပါတော့တယ်။ ဒီလိုနှင့် နေ့စဉ်လို သူဌေးနှင့် အပြင်လိုက်ရင်း သူဖွင့်တဲ့ ဆရာတော့်တရားတွေကို နာဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။ နာရင်းက သဘောကျလာတော့ ကိုယ်တိုင် စူပါဟိုက်တေးသံသွင်းကို သွားပြီး ဆရာတော့်တရားခွေတွေကို ရှာဝယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော် တက္ကသိုလ်ကျောင်းစတက်တဲ့အချိန် ဘာသာရေးစာပေတွေလေ့လာပြီး တရားတွေစနာဖြစ်တော့ အဲဒီအချိန်က လွယ်လွယ်ကူကူနှင့် ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ငှားပြီးနာဖြစ်ခဲ့တာ သပိတ်အိုင်ဆရာတော်၊ ကြာနီကန်ဆရာတော်၊ ဖြူးဆရာတော်၊ ချမ်းမြေ့ဆရာတော် စတဲ့ ဆရာတော်တွေရဲ့  တရားတွေကများပါတယ်။ အဲဒီအချိန်တွေတုန်းက အခုလိုမျိုး ဓမ္မကထိကဆရာတော်တွေလည်း အများကြီး သိပ်မရှိသေး၊ စီဒီ၊ ဒီဗွီဒီခေတ်လည်း မဟုတ်သေးတော့ တရားခွေဆိုတာက အခုလိုမျိုး ပေါပေါများများလည်း မရှိသလို ၀ယ်ပြီးနာဖို့ဆိုတာကလည်း ကျောင်းသားတစ်ယောက်အတွက် ဘက်ဂျက်က စကားပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆရာတော့်တရားခွေတွေကို ကျွန်တော် တစ်ပတ်တစ်ခွေနှုန်းလောက်နှင့် ၀ယ်နာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပိုင်း အဲဒီအလုပ်ကနေ ထွက်လိုက်ပေမယ့် ကျွန်တော့်မှာ အဲဒီသူဌေးဆီက အကျင့်တစ်ခုရသွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ကားမောင်းရင်း တရားနာတဲ့အကျင့်ပါပဲ။ ကျွန်တော့်အိမ်နှင့် ကျောင်းနှင့်ကို ကားမောင်းသွားရင် တစ်နာရီနီးပါးလောက် မောင်းရပါတယ်။ ကျောင်းကို အိမ်က ကားယူသွားဖြစ်တဲ့နေ့တွေဆိုရင် ဆရာတော့်တရားကို ကျောင်းသွားရင်း တစ်ခါ၊ ကျောင်းက အပြန်တစ်ခါ နှစ်ခါ နာဖြစ်ပါတယ်။ နောက် ညဘက် မအိပ်ခင် ကျောင်းစာလုပ်ရင်း၊ တခြား ဗာဟီရအလုပ်တွေလုပ်ရင်း အိပ်ခန်းထဲမှာ တစ်ခါ ထပ်နာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုနှင့် ဆရာတော့်တရားတွေနှင့် ကျွန်တော် နှစ်ပေါင်းများစွာ ယဉ်ပါးနေခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း ဆရာတော့်စာအုပ်တွေထွက်လာတော့လည်း ထွက်သမျှကို ပြန်ဝယ်ဖတ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့်တော့ တရားခွေတွေမှာ ဟောထားခဲ့တာတွေကို ပြန်ပြီး စာအုပ်ထုတ်ထားတာပါ။ ဒါပေမယ့် စာအုပ်မှာ တခါတလေ တရားခွေမှာတုန်းက မပါတာတွေလည်း ပါတတ်ပါတယ်။ တခါတလေလည်း အခွေက ပိုပြည့်စုံနေတတ်ပြန်ပါတယ်။ စာအုပ်နှင့်ကျတော့ ကိုယ်သဘောကျတဲ့နေရာတွေကို Highlight တားလို့ရတာမို့ တစ်မျိုး ကောင်းပါတယ်။
၂၀၀၁ ခုနှစ်လောက်မှာ အင်တာနက်ကို စသုံးဖြစ်ပြီး ဘာသာရေးနှင့်ပတ်သက်တာတွေ ဟိုရှာဒီရှာလိုက်ရှာတော့ ဆရာတော့်အကြောင်းတွေ အနောက်နိုင်ငံကတင်ထားတဲ့ ဘာသာရေးဆိုဒ်တွေမှာ ပါနေတာ သွားတွေ့ပါတော့တယ်။ ဆရာတော်သွားတဲ့ နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်တွေ၊ ဓါတ်ပုံတွေ၊ တရားတွေ ဝေေ၀ဆာဆာနှင့်မို့ ကျွန်တော့်မှာ တောသားမြို့ တက်သလိုမျိုး မြင်ရသမျှ၊ ဖတ်ရသမျှတွေက အံ့သြစရာတွေ ဖြစ်ရပါတော့တယ်။ ဆရာတော်ကို နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းက ဘာသာရေးထက် တွေးခေါ်ပညာရှင်တစ်ဦးအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုကြတာကိုလည်း သတိထားမိပါတယ်။ ဆရာတော့်တရားတွေကို အွန်လိုင်းမှာ လိုက်ရှာဖတ်ရင်းကနေပဲ နိုင်ငံတကာက ဘာသာရေးဆိုဒ်တော်တော်များများဆီကို ရောက်ဖြစ် ဖတ်ဖြစ်ပါတော့တယ်။
ပြောရရင် ကျွန်တော့်ရဲ့  တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘ၀ အသက်နှစ်ဆယ်ကျော်အရွယ်နှစ်များမှာ ဆရာတော်ရဲ့  သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကို အများဆုံးခံခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီအတွက်လည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကျေနပ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်တွေတုန်းကဆိုရင် စကားပြောတာတောင်မှ လေသံနှင့် အသုံးအနှုန်းက တခါတလေ ဆရာတော့်လေသံပေါက်နေလို့ အိမ်ကလူတွေဆိုရင် “နင့်လေသံက ဦးဇောတိကလေသံပေါက်နေပြီ” လို့တောင် အပြောခံရတဲ့အထိပါ။
ဆရာတော်ရဲ့  အဆုံးအမတွေကြောင့်ပဲ တရားအားထုတ်ဖို့ စိတ်ဝင်စားဖြစ်ခဲ့ပြီး အားလည်းထုတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆရာတော့်စာတွေကို ဖတ်ခါစနှစ်တွေတုန်းက သဘောကျတယ်ဆိုပေမယ့်လို့ တချို့  နေရာတွေမှာ တရားအားထုတ်မှုကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ စိတ်သဘာဝနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြောတဲ့အပိုင်းတွေဆိုရင် လက်တွေ့ ကိုယ့်မှာလုပ်ထားတာအခံမရှိတော့ ထဲထဲဝင်ဝင်နားမလည်ခဲ့ပါဘူး။ သတိပဋ္ဌာန်တရားကို အားထုတ်ဖြစ်သွားတဲ့နောက်မှာ ဆရာတော့်တရားတွေပြန်နာဖြစ်တော့မှပဲ ဆရာတော်ဘာဆိုလိုချင်တယ်ဆိုတာကို သေသေချာချာ နားလည်သဘောပေါက်ပါတော့တယ်။ ဒီလိုနှင့် ဆရာတော့်တရားခွေတွေနှင့် စာအုပ်တွေကို နောက်တစ်ခါ ပြန်နာ၊ ပြန်ဖတ်ရင်း အရသာထပ်တွေ့ခဲ့ရပြန်ပါတယ်။
ဆရာတော့်ကျေးဇူးတွေကို အောက်မေ့သတိရတိုင်း ဆရာတော့်ကို ဖူးတွေ့ချင်စိတ်ဖြစ်မိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အကြောင်းတွေက မညီညွတ်တော့ အခုအချိန်အထိ ကျွန်တော် ဆရာတော်ကို အပြင်မှာ တစ်ခါမှ မဖူးဘူးသေးပါဘူး။ ဒါနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆရာမြသန်းစံကို မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ကြီး ဆုံးမတဲ့စကားလေးကို သတိရမိပါတယ်။ ဆရာမြသန်းစံက ဆရာတော်ကြီးကို ဖူးချင်လို့ ဆရာတော်ကြီးရှိတဲ့ တောထဲကို ခက်ခက်ခဲခဲသွားပြီး ဖူးတော့ ဆရာတော်က သူ့ဆီကို ဒီလိုမျိုး လာတာထက် ကိုယ့်ဆရာသမားအားထုတ်တဲ့တရားလမ်းကြောင်းအတိုင်း အားထုတ်ရင်းက ဆရာသမားသိတဲ့တရားကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင် သိပြီး တရားအရသာကို ခံစားသုံးဆောင်နိုင်တာကမှ ပိုအနှစ်သာရရှိကြောင်း “မမေ့သူတို့ ဓလေ့တူ၍ အတွေ့တူတို့ အတူတွေ့” ဆိုတဲ့ စာအုပ်မှာ ရေးထားတာလေးကို ဖတ်မိတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း ပြန်ဆင်ခြင်သုံးသပ်မိပါတယ်။ တကယ်တော့ အပြင်မှာ လူချင်းတွေ့ဖို့ထက် စိတ်ကျက်စားရာနေရာချင်းနီးစပ်ဖို့၊ ဉာဏ်ကျက်စားရာ နေရာချင်း ထပ်တူကျသွားဖို့ကသာ ပိုအရေးကြီးတာပါလေ။
နက္ခတ္တဗေဒပညာအရပြောမယ်ဆိုရင် ဇူလိုင်လ ၂၃ရက်ကနေ သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်အတွင်း မွေးဖွားကြတဲ့သူတွေကို သိဟ်ရာသီဖွားလို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့  အမှတ်လက္ခဏာကတော့ ခြသေ့င်္ပါပဲ။ ဒီရာသီဖွားတွေရဲ့ စရိုက်လက္ခဏာတွေကိုတော့ လေ့လာဖူးတဲ့သူတွေဆိုရင် သိလောက်မှာပါ။ ခြင်္သေ့တို့ရဲ့ သဘာဝအတိုင်း တစ်ကောင်ထဲတောထဲမှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေတတ်ပြီး ဘာကိုမှလည်း စိုးရွံ့ မနေတတ်ကြသလိုမျိုး အကျင့်စရိုက်တွေ အဲဒီရက်ပိုင်းမွေးကြတဲ့ သူတွေမှာ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဒါကိုပဲ ဆရာတော်က သူကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့ သူ့အကြောင်းမှာ အခုလိုမျိုးရေးထားပါတယ်။
Living too long in one place makes me feel like I'm in prison. I'malion, according to the Burmese tradition. I really feel like roaming in the mountains likeamountain lion. Ah, freedom... I can't tolerate any restriction, bond, or tie. Even attachment that restricts my freedom is not to my liking. People get attached to me and I see that asadanger to my freedom. I love freedom and I can't exchange it for anything. I love freedom of mind too.
Mountain lion I am. Alone, but not lonely anymore. I have learnt to live alone.
ဆရာတော်ရဲ့  “လွတ်လပ်သောစိတ်” ဆိုတဲ့စာအုပ်ကို ဖတ်ဖူးကြရင် ဆရာတော် လွတ်လပ်မှုကို ဘယ်လောက် သဘောကျတယ်၊ တန်ဖိုးထားတယ်။ လူတွေကိုလည်း ဘယ်လောက်လွတ်လပ်စေချင်တယ်ဆိုတာကို သတိထားမိကြမှာပါ။ နောက် Snow In The Summer စာအုပ်ကို ဖတ်ကြည့်ရင်လည်း ဆရာတော်အနေနှင့် စိတ်လွတ်လပ်မှုကို ဘယ်လောက်တန်ဖိုးထားသလဲဆိုတာကို စာအုပ်ရဲ့  နေရာတော်တော်များများမှာ ရေးထားတာ တွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာတော်က တစ်နေရာမှာတော့ သူ့ဆန္ဒကို ဒီလိုထုတ်ဖော် ပြောကြားထားပါသေးတယ်။
I want to livealong life. Why? Because, I can do much good for myself and for others too.If you love yourself, be mindful. That is the most loving thing. Be mindful of your thoughts and feelings. By knowing yourself better you becomeabetter person.
အသက်အရှည်ကြီးနေချင်တဲ့ ဆရာတော့်အတွက် ဆရာတော်ရဲ့  သက်တော် (၆၅)နှစ် ပြည့်တဲ့ မွေးနေ့မှာ ကျန်းမာချမ်းသာစွာဖြင့် သာသနာ့တာဝန်ကိုလည်း ထမ်းဆောင်ရင်း၊ လူ့ဘ၀သက်တမ်းစေ့ အသက်ရှင်သန်ပြီး လူအများစိတ်ငြိမ်းချမ်းဖို့၊ တရားအသိဉာဏ်တွေတိုးတက်ဖို့၊ အတွေးအခေါ်တွေ ရှင်သန်ရင့်ကျက်ဖို့ အတွက် ရှေးကထက် ဆထက်တိုးလို့ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေလို့ ဆရာတော်ရဲ့  ကျေးဇူးဂုဏ်တွေကို အာရုံပြုရင်း တပည့်တော် ရိုသေစွာဖြင့် ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သအပ်ပါတယ် ဆရာတော်ဘုရား။
ကျွန်တော်ရေးတဲ့ ဒီစာကိုဖတ်ဖြစ်ကြတဲ့ ဆရာတော့်ကျေးဇူးတွေရှိထားကြတဲ့ တပည့်အပေါင်း၊ စာဖတ်ပရိတ်သတ်အပေါင်း၊ တရားနာပရိတ်သတ်အပေါင်းကလည်း ဆရာတော့်မွေးနေ့အတွက် ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါအုံးလို့ နှိုးဆော်တိုက်တွန်းရင်း....။
Posted by The Bliss Of Emancipation at 7:50 AM0comments Links to this post
ငါစိတ်ချမ်းသာသလို အားလုံး စိတ်ချမ်းသာကြပါစေ။
ငါ့အတွက်လည်း အကျိုးရှိတာ၊ အများအတွက်လည်း အကျိုးရှိတာကို လုပ်မယ်။
ငါတစ်ယောက်တည်း အကျိုးရှိပြီးတော့ အများအကျိုး ထိခိုက်တာကို မလုပ်ဘူး။
ရိုးရိုးသားသား၊ မှန်မှန်ကန်ကန်၊ ကြိုးကြိုးစားစား လုပ်မယ်။
မရိုးသားတာ၊ မမှန်ကန်တာကို မလုပ်ဘူး။
ဘယ်လောက်ပဲ အခက်အခဲတွေရှိရှိ အမှန်ကန်ဆုံး၊ အကောင်းဆုံး၊ အရိုးသားဆုံး နည်းလမ်းကို ရအောင်ရှာပြီးတော့ အခက်အခဲတွေကို ဖြေရှင်းသွားမယ်။
ငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်ဟာ လွတ်လပ်တဲ့စိတ် ဖြစ်တယ်။
ငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်ဟာ အမှန်ကို လိုလားတဲ့စိတ် ဖြစ်တယ်။
ငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်ဟာ တန်ဖိုးအရှိဆုံးအရာ ဖြစ်တယ်။
ငြိမ်းချမ်းမှုမရှိရင် ပစ္စည်း၊ ဥစ္စာ၊ ရာထူး၊ အာဏာ ဘယ်လောက်ပဲရှိရှိ ဘ၀ဟာ အဓိပ္ပာယ် မရှိနိုင်ဘူး။
ငြိမ်းချမ်းတဲ့သူဟာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိတယ်။
ငြိမ်းချမ်းတဲ့သူဟာ မြင့်မြတ်တဲ့သူ ဖြစ်တယ်။
မြင့်မြတ်တဲ့သူဟာ သဘောထားကြီးတဲ့သူ ဖြစ်တယ်။
သဘောထားကြီးတဲ့သူဟာ မျှတတဲ့သူ ဖြစ်တယ်။
သဘောထားကြီးတဲ့သူဟာ ခွင့်လွှတ်တတ်တဲ့သူ ဖြစ်တယ်။
ငြိမ်းချမ်းတဲ့သူဟာ မိမိကိုယ်ကို လေးစားတဲ့သူဖြစ်တယ်။
မိမိကိုယ်ကို လေးစားတဲ့သူဟာ သူတစ်ပါးကို လေးစားတဲ့သူ ဖြစ်တယ်။
ငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်ဟာ အမှန်ကို လိုလားတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်။
ငြိမ်းချမ်းနေတဲ့သူဟာ အောင်မြင်နေတဲ့သူ ဖြစ်တယ်။
ငြိမ်းချမ်းနေတဲ့စိတ်ဟာ ကျေနပ်နေတဲ့စိတ် ဖြစ်တယ်။
ငြိမ်းချမ်းနေတဲ့ စိတ်မှာ ဂုဏ်သိက္ခာ ရှိတယ်။
ငြိမ်းချမ်းနေတဲ့စိတ်မှာ သတ္တိတွေ၊ အင်အားတွေ ပြည့်နေတယ်။
စိတ်ရဲ့  ငြိမ်းချမ်းမှုဟာ အပျော်အပါးထက် ပိုပြီး ကျေနပ်စရာ ကောင်းတယ်။
ကောင်းတဲ့နည်း၊ မှန်ကန်တဲ့နည်းနဲ့ အောင်မြင်တဲ့သူ၊ ကြီးပွားတဲ့သူ ဖြစ်ရမယ်။
ငါ့မှာ အရည်အချင်းကောင်းတွေ အများကြီးရှိတယ်။
ငါဟာ ငါ့အကျိုးကိုရော၊ အများအကျိုးကိုပါ အများကြီး ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့သူ ဖြစ်တယ်။
ငါဟာ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ စိတ်ဓါတ်ရော၊ အသိဉာဏ်ရော၊ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ရော တိုးတက်နေတယ်။
Typed By: Monica Pyone
Posted by The Bliss Of Emancipation at 10:18 AM0comments Links to this post
Labels: Dhamma Talks (Audio), U Jotika
မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီး ဂဏနာနည်းကို အခြေခံ၍ ဟောကြားတော်မူသော “၀ိပဿနာ ရှုပွားနည်း” တရားတော်
Posted by The Bliss Of Emancipation at 9:49 AM0comments Links to this post
Labels: Dhamma Talks (Audio), Minkun Sayardaw
စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောဘ၀ကို ဓမ္မဖြင့် တည်ဆောက်ခြင...
ရှင်ဒေ၀ဒတ်၏ မြတ်စွာဘုရားရှင်အား နောက်ဆုံးကန်တော့သွ...
သစ်တုံးတရားတော် (၁၀) သစ်တုံးပမာ ဒေသနာတော် - သီးလုံ...
မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီး ဂဏနာနည်းကို အခြေခံ၍ ဟောကြားတေ...